कार को ब्रेक लगान सिस्टम मा हुन सक्छ कि सबै भन्दा ठूलो समस्या - ब्रेकिंग जब कम्पन। यो किनभने, एउटा चरम अवस्थामा, कार बस सही क्षणमा रोक्न सक्दैन, र त्यहाँ एक दुर्घटना हुनेछ। व्यवसायी आपतकालीन अवस्थामा, ड्राइभर र स्टेरिड़ र pedals मा मुटुको धड्कनहरू डराएका भन्ने तथ्यलाई यो विशेषता र ब्रेक थिचेर को शक्ति कमजोर। यी समस्या को सबैभन्दा खराब मात्र पूर्ण निष्क्रिय हुन सक्छ ब्रेक प्रणाली। तुरुन्तै सफाया गर्नुपर्छ पहिचान समस्या - त्यहाँ कार को यो व्यवहार लागि धेरै मुख्य कारण हो। यो सडक प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा निर्भर गर्दछ।
को कम्पन कसरी पहिचान गर्ने?
अक्सर घचघच्याउनुहुन्छ र ब्रेक पेडल र स्टेरिड़ - interfering प्रक्रिया रोक्न भने यो जस्तो छ विरोधी-लक सिस्टम। ब्रेकिंग सुक्खा हुन र कोटिंग स्तर सक्नुहुन्छ समयमा कम्पन पहिचान। यो डामर मा कंपन लागि मिसिन परीक्षण गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। त्यसपछि ABS, यो कार छ भने, प्रक्रिया हस्तक्षेप छैन। यो 80 मी / घन्टा बढाउने आवश्यक छ, र त्यसपछि एकाएक, तर पाङ्ग्रा ताला बिना, गति कमी सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँ ब्रेकिंग अवधिमा विशेषता कम्पन थियो भने तपाईं मर्मत विचार गर्नुपर्छ।
को ब्रेक पेडल मा कम्पन को कारण
यो अप्रिय घटना धेरै कारण उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। प्रायजसो मा, व्यवसायीक भन्न ब्रेक डिस्क, ब्रेक ड्रम। कम सामान्यतः (तर पनि छैन बाहिर शासन गर्न) हावा ब्रेक सिस्टम को रेखा मा पाइन्छ। कहिलेकाहीं कारण नराम्ररी टायर, unbalance संग पाङ्ग्रा पहना छ। व्हील को घटता - यो पनि हो ब्रेकिंग गर्दा स्टीयरिंग को कम्पन। को antilock ब्रेक सिस्टम समस्या को दुर्लभ अवस्थामा, तर दोष सजिलै वाहन ECU निदान छ। कारण बीचमा पहना घटक छलफल छैनन् हुन।
ब्रेक पैड को जंग
वाहन धातु को गरे, तर धातु जंग गर्न susceptible। मेशिन न्यानो ग्यारेज भण्डारण गरिएको छ भने पनि, तपाईं यसलाई जंग छैन विचार गर्न आवश्यक छैन। लामो समय को लागि कार जहाँ पैड को डिस्क संग सम्पर्क मा हो ठाउँमा उभिए भने, जंग देखिन्छ। यस मामला मा, उत्पादन गर्ने पहिलो प्रयास निषेध स्पष्ट पेडल को कम्पन महसुस ब्रेकिंग जब ब्रेक। कहिलेकाहीं यो प्रभाव नै राख्न लिन्छ। तर डिस्क र पैड को सबै भन्दा परिवर्तन हुनुपर्छ।
जंग साथै, तिनीहरू केवल गरिब गुणस्तर हुन सक्छ। आज, सरल विवाह गर्न त्यहाँ। र पाङ्ग्रा अन्तिम तह काम unevenly लगाउने हुनेछ गर्दा, धेरै राम्रो अवस्थामा थिएनन् भने। केही ब्लक घर्षण अस्तर मा सम्पूर्ण टुक्रा crumble। ब्रेकिंग गर्दा स्टेरिड़ मा कम्पन डिस्कमा ब्लक gapping को परिणाम हो।
को ब्रेक डिस्क ज्यामिति परिवर्तन
यो ब्रेक पेडल र स्टेरिड़ मा कंपन निम्त्याउँछ अर्को कारण हो। यो डिस्क को तीव्र ठंडा मा निहित। ड्राइभर ड्राइभिङ र अर्को एक ट्राफिक प्रकाश देखि तेजी सार्दा को एक आक्रामक शैली छ जब पाङ्ग्राहरू बस शांत समय छैन। तथापि, तात्दै उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ र पैड र डिस्क बीच प्रदान जो सक्छ एक समर्थन, को शान्त ड्राइभिङ पर्याप्त अवकास छ। एक कार एक पानीको सानो खाडल मा ड्राइव भने, ब्रेक डिस्क निभाउन छ, र ब्रेकमा वा deforms। यी deformations पछि यो संग "आठ" एक साइकल पाङ्ग्रा मिल्दोजुल्दो छ। समस्या छ कि डिस्क मा यी दृश्य भेरिएसनहरूमा देख्न सकिन्छ। उत्तरार्द्ध गरिब गुणस्तर छ भने, यो को तात्दै धेरै adversely प्रभावित छ। उहाँले प्रदान विरूपण, र यसैले, बस अपरिहार्य ब्रेकिंग बेला पेडल को कम्पन।
ड्रम-प्रकार ब्रेक मा विरूपण
ड्रम ब्रेक वस्तुतः कुनै विरूपण विषय हो, तर कहिले काँही समस्या तिनीहरूलाई हुन सक्छ। तिनीहरूले, डिस्क जस्तै, (तर धेरै कम डिग्री गर्न) गरम करना गर्न सक्नुहुन्छ। हतारमा ड्राइभर त एकदम दूरी पार गर्नेछ एक मार्गदर्शन ब्रेक देखि कार हटाउन बिर्सनुहुन्न र यसरी गर्दा तात्दै हुन्छ। ड्राइभर कि कार लगभग जाने छैन नोटिस सक्छ। जब तपाईं रोक्न हथौडा उठाएको छ, वा हातले लगाउने ब्रेक फेरि twitches। बाट मा भएको धातु ताप विस्तार गर्न tends कि ज्ञात स्कूल भौतिक पाठ्यक्रम। ठंडा मा - Narrows। ब्रेक ड्रम पैड को मामला मा ड्रम यसको सामान्य अवस्थामा आउन अनुमति छैन। फलस्वरूप, यस ज्यामिति परिवर्तन र एक अण्डाकार हुन्छ छ। त्यसैले पेडल को कम्पन ब्रेक गर्दा ब्रेकिंग। कार को ब्रेक लगान सिस्टम को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, त्यहाँ दुई समानान्तर वा विकर्ण सर्किट छन्। केवल रियर धुरा बजेट कार मा ड्रम ब्रेक आज पाउन सकिन्छ। तथापि, एक विशेष avtoinzhenery एक समानान्तर सर्किट सिर्जना गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि पेडल मा पिटाई महसुस हुनेछ। यो विकर्ण छ भने ब्रेकिंग गर्दा, त्यहाँ एक कम्पन स्टीयरिंग देखाइएको छ। बिकृति वा क्षतिग्रस्त रील को काम साइट मा चमक गर्न सक्छन् पहिचान। यो असमान हुनेछ।
को रियर र अगाडि सिलेंडर सही काम गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर यी ब्रेक घटक बस खट्टे बारी, र त्यसपछि असफल। यो ब्रेकिंग बेला पेडल को कम्पन उठ्छ। यो समस्या समाधान गर्न धेरै सजिलो छ - केवल यी तंत्र WD-40 वा यस्तै स्नेहक (एनालग "Mannol" को उत्पादन) मा छप। तर प्राय मात्र प्रतिस्थापन गर्न मद्दत गर्छ।
ब्रेकिंग समयमा कंपन को कारण रूपमा पाङ्ग्रा हब
यो एक धेरै दुर्लभ कारण छ, तर यो मूल्य छैन शासन गरे। अक्सर हब मात्र एक दुर्घटना वा एक अत्यन्तै बलियो प्रभाव द्वारा विकृत छ। तर, यो वाहन मा प्वाल प्रवेश भने सम्भवतः बन्द पाङ्ग्रा आउनेछ वा कम्पन को स्टेरिड़ सार्न सजिलो मा हुन्छ। व्हील असर जाँच गर्न amiss छैन। त्यहाँ लगाउने हो भने, त्यसपछि त्यो बिट को उद्भव लागि मुख्य कारण हो। को निदान कार jacking हुन लागि (पाङ्ग्रा छ) र जाँच प्ले यो - साइड गर्न तर्फ देखि Sway। प्ले न्यूनतम हुन, र परिक्रमा गर्नुपर्छ - ध्वनि र rumble बिना।
एक कुशल ब्रेक लगान प्रणाली र पेडल मा मुटुको धड्कनहरू
को ब्रेक सिस्टम पूर्ण रूपमा serviceable छ र ब्रेक लगान समयमा कम्पन अझै पनि छ र अझै पनि बिग्रेको तत्व फेला पार्न व्यवस्थापन भएन भने, तब समस्या कम स्पष्ट ठाउँमा लुकेका छन्। यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञहरु पाङ्ग्रा सन्तुलन जाँच गर्न सल्लाह। तथ्यलाई अपकेंद्र शक्ति को पाङ्ग्रा मा unbalance छ। यो सबै समस्या को कारण छ। एक अनुभवी चालक सजिलै बन्द-ब्यालेन्स पाङ्ग्रा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर यस मामला मा, कम्पन छैन केवल पेडल मा, तर पनि शरीर भर हुनेछ। तपाईं पनि अगाडि निलम्बन जाँच गर्नुपर्छ। ब्रेक लगान समयमा ब्रेक पेडल को कम्पन को बिकृति निलम्बन हतियार वा असुरक्षित एक संकेत हुन सक्छ।
यसलाई ध्यान दिएर माउन्ट शरीर, निलम्बन र ब्रेक सिस्टम को विश्वसनीयता जाँच गर्न सिफारिस गरिएको छ। को स्टेशन बाट विशेषज्ञहरु अक्सर सम्पूर्ण वाहन मा कडा बोल्ट गरिबी हो। विशेष गरी यो समस्या कार प्राय गरिब गुणस्तर सडक मा संचालित छ भने, जरुरी छ।
अर्को असामान्य कारण, जसको लागि ब्रेकिंग गर्दा त्यहाँ कम्पन छ - यो ब्रेक caliper मा असमान तनाव छ। यसको जाम को फलस्वरूप। तर यो समस्या पहिचान गर्न आफैलाई धेरै गाह्रो छ - तपाईं एक विशेष सेवा स्टेशन भ्रमण गर्न आवश्यक छ।
गति मा ब्रेकिंग समयमा कम्पन
कार उच्च गति मा यात्रा गर्दा, ब्रेक सिस्टम घटक गर्मी उजागर। कम्पन वा हिंसात्मक मिलान - यो डिस्क र caliper धेरै तातो, वेज र गति को फलस्वरूप समयमा ब्रेकिंग सम्भव छ।
खतरनाक Beats: अनिश्चित पाङ्ग्रा
यो समस्या legkoustranimaya। यो पनि सजिलो निदान। यो अक्सर त्यहाँ विभिन्न कम्पन र मुटुको धड्कनहरू हो, यस कारण लागि हो। सायद गरिबी एक वा सबै चार पाङ्ग्रा सुरक्षित छ। कुनै कुरा यो को कारण हुन सक्छ कसरी सरल, यो धेरै खतरनाक हुन्छ। यदि समस्या समयमा हुन फेला सक्दैन, नतिजा दयनीय, हुन सक्छ ड्राइभर वा यात्रु लागि, तर पनि अन्य सडक प्रयोगकर्ताका लागि मात्र होइन। यस मामला मा मर्मत - तपाईं बिट समय मा नोटिस छैन भने, अर्थात्, धेरै महँगो हुन सक्छ। विभाजित हब पाङ्ग्रा विरूपण, को ब्रेक डिस्क को विरूपण भइरहेको र डिस्क मा माउन्ट प्वालहरू भङ्ग। ब्रेक लगान कम्पन छ भने, यो सबै बोल्ट सुरक्षित पर्याप्त कडा छन् फेरि निश्चित गर्न राम्रो छ। तर हुँदैन पनि विशेषता चीची गर्नु तान्न।
हरा र कम्पन को कारण अरू के छ?
यी कारणहरू दुर्लभ छन्, तर अझै पनि तिनीहरूले विचार गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीं स्टीयरिंग रैक मा सानो समस्या वा कार को हवाई जहाज को पहिये पनि बाहिर पहना बलजोडाइ छन्। साथै, कम्पन र चालु-बाहिर कारण थकित-बाहिर शक गर्न हुनेछ। तर यो मामला मा प्रभाव परिक्रमा को समयमा महसुस हुनेछ। पनि ब्रेक सिस्टम मा कुट्छ र स्टेरिड़ बलियो कार blows द्वारा ट्रिगर गर्न सकिन्छ।
यो समस्या बेवास्ता गर्न सम्भव छ?
ब्रेकिंग जब कम्पन हुन्छ भने - त्यसपछि यसलाई ढिलाइ बिना स्टेशन भ्रमण गर्न राम्रो छ (VAZ-2170 कुनै अपवाद छ)। केही वर्ष भर त जाने - केही समय यो समस्या आफ्नो आँखा बन्द गर्न को लागि तर यो सम्भव छ। तर, कारण पाङ्ग्रा मा कमजोर कस पागल मा निहित छ भने, यो धेरै खतरनाक हुन्छ। को ब्रेक सिस्टम मा यस्तो बीट्स चेसिस मा अन्य घटक मा एक महत्वपूर्ण लोड छ। साथै, गति, पहिले नै उल्लेख रूपमा, एक दुर्घटना प्रकुपित सक्छ कम्पन - कार नियन्त्रण गुमाउन धेरै सजिलो छ। एक कार ड्राइभिङ नै खतरनाक छ, र यदि यस्तो लक्षण देखा, यो पत्ता लगाउन र कारण निर्मूल गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तपाईं आफैलाई र यात्रु खतरामा हुँदैन। राम्रो हालत मा आफ्नो कार राख्न - आफैलाई र आफ्नो प्रियजनलाई हेरविचार।
थप सहज ड्राइभिङ बनाउन पछाडिको दृश्य क्यामेरा सेट गर्न
LADA 2115 - उच्चतम स्तर मा प्राविधिक उपकरण
"Kish को कथा": एक संक्षिप्त retelling। "Kish को कथा," Dzhek लन्डन
छाँट्दछ संग भरी धुनमा
मेसन गरेको नेट - उपकरण कस्तो र कहाँ यो प्रयोग गरिन्छ?
कम्प्युटरको लागि पावर आपूर्ति। सही छनौट कसरी गर्ने?
दबाइ "Panadol": प्रयोगको लागि निर्देशन
मानिसहरूसँग महिलाहरु Glow बनाउँछ
Gusset - यो के हो? को gusset स्लिभ कसरी सी गर्न